समय कति छिटो बित्छ है, बजरङ्गी भाईजानकी मुन्नी यस्तो जवान भइन्, यसरी मनाइन दिपावली हेर्नुहोस तस्विरमा – नेपाली सूर्य
समय कति छिटो बित्छ है, बजरङ्गी भाईजानकी मुन्नी यस्तो जवान भइन्, यसरी मनाइन दिपावली हेर्नुहोस तस्विरमा
November 18, 2020 Nepali SuryaLeaveaComment on समय कति छिटो बित्छ है, बजरङ्गी भाईजानकी मुन्नी यस्तो जवान भइन्, यसरी मनाइन दिपावली हेर्नुहोस तस्विरमा
काठमाडौं । धेरैले बजरङ्गी भाईजान भारतीय बलिउड नाट्य चलचित्र हेर्नुभएको हुनुपर्छ । त्यस चलचित्रका निर्देशक कबीर खान थिए र निर्माता सलमान खान र परवेज शेख रहेका थिए । चलचित्रमा सलमान खान पवन कुमार चतुर्वेदीको भुमिकामा रहेका थिए ।
करीना कपूर खानलाई रसिकाको भुमिकामा देखाइएको छ । नवाजुद्दीन सिद्दीकी पनि पाकिस्तानी संवाददाताको भुमिकामा रहेका छन् । स्व. ओम पुरी मौलाना साहबका रुपमा रहेका थिए । मुन्नी यी सबै कलाकारहरु भन्दा धेरै चर्चामा आएको नाम थियो । मुन्नीको वास्तविक नाम हर्षाली मल्होत्रा हो । सन् २०१५ अर्थात आज भन्दा झण्डै ५ वर्ष पहिले प्रदर्शनमा आएको चलचित्रमा बालिकाको रुपमा देखिएकी मुन्नी अहिले बद्लिएकी छिन् ।
बालकलाकार मल्होत्राको उक्त समय निकै प्रसंशा भएको थियो । हर्षाली अब भने ठूली भएकी छन् । त्यस समयको तस्बिर र अहिलेको तस्बिर हेरर उनलाई चिन्नसमेत गाह्रो हुन्छ । उनी सामाजिक सञ्जालमा किनै सक्रिय रहेन गर्छिन् ।
उनले दीपावलीमा हातमा थाली लिएर सिरमा दुपट्टा लगाएको तस्बिर सावर्जनिक गरेसँगै फेरि चर्चामा आएकी हुन् । अहिले पनि उनको उमेर धेरै भएको छैन । उनको जन्म सन् २००८ मा भएको थियो । उनी अहिले १२ वर्षकी भइन् । तर जवान देखिन्छिन् ।
पर्वतको एक महिलाले जन्माइन शरीर जोडिएका शिशु, जन्मिएपछि शिशुको मृत्यु
मानुङकोट जाँदै गरेको हायस भीरबाट खस्यो, २८ वर्षकी सुनिता गुरुङको मृत्यु
नायक दिलिप रायमाझीकी छोरी दिब्या चलचित्रमा डेब्यू गर्दै ! फिल्म नखेल्दै सुन्दरताको चर्चा (फोटोहरु सहित)
September 15, 2021 Nepali Surya
बलिउड चर्चित नायिका दीपिका पादुकोणको आज जन्मदिन, शुभकामना दिनेको ओइरो
January 5, 2021 Nepali Surya